Review of Seto Dharati [सेतो धरती] | Book by Amar Neupane | Nepali Book Review at Nepali Expert
कसरी एउटा जिन्दगी नजिएरै सकिन्छ ?
एउटा नारीले कतिसम्म भोग्नुपथ्र्यो हाम्रो समाजमा ? कसरी आफ्नै साख्खै भाइले पनि दिदीको पीडा बुझ्न सक्दैन । अनि कसरी एउटा जिन्दगी नजिएरै सकिन्छ ? पढ्दा साह्रै मन दुखायो यो उपन्यासले । लेखकलाई बधाई छ ।
Yubraj Jaisi rated it
नेपाली साहित्यका पारखीहरुले पढ्नै पर्ने
सरल तरिकाले जीवनमा आइपर्ने जटिलताहरुलाई ठ्याक्कै देखाइएको उपन्यास हो 'सेतो धर्ती' । लेखाइको सरलता, पात्रहरुको संवाद अनि मनोवादले पाठकहरुको ध्यान सजिलै तानेको पाएँ । समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विभेदलाई पनि उत्तिकै दरो तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ, यस उपन्यासले । यस्ता थुप्रै अरु कारणले गर्दा पनि नेपाली साहित्यका पारखीहरुले पढ्नु पर्ने उपन्यास हो 'सेतो धर्ती' ।